गर्मीमा कसरी गर्ने सेक्स ? तपाईका लागि टिप्स – Education Awareness
गर्मीमा कसरी गर्ने सेक्स ? तपाईका लागि टिप्स
२१ बैशाख २०७६, शनिबार २१:३०
अहिले नेपालमा अत्याधिक गर्मी बढेको छ । झन् तराईमा त सहनै नसक्ने गर्मी छ । यस्तो अवस्थामा सेक्सबाट सन्तुष्ट नभएर धेरै दम्पतीहरु बिजोगमा होलान् । गर्मीमा सेक्स गर्दा पूर्णसन्तुष्टि पाउन गाह्रो हुन्छ । अहिले सेक्स मज्जा होइन सजा बन्न सक्छ । यहाँहरुका लागि मैले चार टिप्स दिएकी छु ।
१.स्वीमिङ्ग पुल : गर्मीमा धेरै युवा युवतीहरु नुहाउनका लागि स्वीमिङ्ग पुल धाउने गर्छन् । यहाँहरुले कहीले स्वीमिङ्ग पुलमा सेक्स गर्नु भा छ ? होइन भने यस पटक स्वीमिङ्ग पुलमा गएर सेक्स गर्नुस् धेरै मज्जा पाउनु हुनेछ । झन् स्वीमिङ्ग पुलमा सेक्स गर्न महिलालाई अत्याधिक मन पर्छ ।
२.आईस(बर्फ)को प्रयोग : गर्मीमा यहाँहरुले आईसको प्रयोग गरेर सेक्स गर्दा पूर्ण आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ । यहाँले आईसको एक टुक्रा आफनो ओठमा राखेर आप्mनो साथीको जीउमा स्पर्स गर्नुस् अनि सेक्स जारी राख्नुस् । जसबाट शितलता प्रदान गर्नु मात्र होइन तपाईको सेक्स पाटर्नको उत्तेजना पनि बढाउने छ । एक पटक प्रयोग गरेर हेर्नुस् ।
३.फलोर माथि : सेक्स गर्दा शरिर तातिन्छ । झन् गर्मीमा सेक्स गर्दा त शरिरसँगै बेड पनि तातिन्छ । त्यसकारण भुँईमा सेक्स गर्नु उचित हुन्छ । आप्mनो साथीलाई लिएर भुँईमै लडिबडी गर्नुस् अनि सेक्सको मज्जा उठाउनुस् ।
४.बाथरुप (शावर) : पानीको झरी परिरहदा माया गर्न अतिनै मज्जा आउँछ । तर हरेक क्षण पानी पर्नु सम्भव छैन । तर तपाईले शावरमा नुहाउदै सेक्स गर्नुहुन्छ भने पानी पर्दा गर्नुभएको सेक्सको मज्जा पाउनु हुन्छ । गर्मीमा सहज सेक्सका लागि सुलभ उपलब्ध हुने उचित स्थान भनेकै बाथरुपको शावर हो । यी टिप्सहरु प्रयोग गर्नुस् र आफनो यौन जीवन सुन्दर पार्नुस् ।